Ina Dhuubo oo Ceebtooda Banaanka Soo Dhigay Kuwa ay Kooxda Jwxo-shiil ku Adeegtaan – Rasaasa News
Jan 20, 2010 afagaal, Ina Dhuubo, Maxamed Ibrahin
Waxaa e-mail laga xishoodo na soo gaadhsiiyey Cadaani Hirmooge [Ina Dhuubo], waxaanuna ka xishoonay in aanu bulshada u soo bandhigno ceebta ciyaal yar yar oo reer Ogadeeniya ah oo ay caqliga kolkii hore ka xaday kooxda Jwxo-shiil, eeggana ay damceen in ay ceebeeyaan.
Nasiib daro waxaa ceebtaas soo bandhigay bogga Cakaara.com, ee laga lee yahay Kaalinka 5aad. Kolba hadii ay arintu halkaas gaadhay waxaanu jeclaysanay in aanu runta sheegno oo aanaan waxba qarinin.
Sida aanu in badan ku celcelinay jwxo-shiil, waxaa uu adeegsadaa dadka ugu akhlaaqda xun ee aan xishoonin “fool xumadu ma xishooto”, qoraaladaas aanu in badan idiin soo gudbinay dad baa noo arkayey in aanu neceb nahay kooxda Jwxo-shiil, balse waxa aanu ku nacnay ayaa jiray oo aan hoosba loo dayin.
Dhalinta ugu akhlaaqada xun ee uu Jwxo-shiil samaystay waxay joogaan dalka Ingriiska mana aha kuwo mustaqbal leh. Waa dad u go,ay tumasho oo aan ka bixin Kalaabyada rag iyo dumarba, qaar kuwaas la mid ah ayaa waxay jogaan Iskandiniifiyaanka iyo Australia.
Ninka iyo Naagta isla hurda ee aad argtaan, waa naag ay saagaal nin soo furtay haatanse uu qabo webmasterka Qorahey.com, midka gadhka leh waa Cabdulahi Afyuub, oo paltak looga yaqaan AFAGAL. Kuwa kale waa dhalinyaro lala qastay wixii ay jeclaayeen ee xaaraanta ahaa, dambigeedana waxaa leh Jwxo-shiil.
Hadab sidee ayaa lagu helay sawiradan, sawiradan waxaa bixiyey Cadaani Hirmooge oo ah ninka ugu ciyaal suuqsan kooxda Jwxo-shiil. Sababta uu ku bixiyeyna waxaa weeye waxaa is qabtay isaga iyo Maxamed Ibrahin webmasterka Qorahey.com, arimo guur kolkii uu tagay Australia. Cadaani waxaa uu tagay guriga Ina Ibrahin wuxuuna yidhi naagta aad qabto aniga ayaa rabay in aan guursado, laakiin adiga ayaa iga hor guursaday, dhibse ma leh oo kolka aad furto ayaan sugayaa. Hadalkii wuu ka xumaaday Cadaani iyo Ina Ibraahin, Qaaxo oo ay rabeen in uu dhex galo ayaa la saftay Ina Ibrahin.
Arintii colaada ahayd waxay gaadhay Iskandenifiyanka, cadaanina wuxuu ku soo noqday Denmarka, wuxuuna damcay in dhaliyaro joogta Iskandeenifiya in uu u adeegsado qoraha qorahey, dhaliyaradii waxay u arkeen in Cadaani uu joojiyo dhibaatada uu wado, kolaas ayey iyagana isqabteen.
Maxamed Ismaciil ayaa Cabdulahi Mukhtaar waydiistay in uu Cadaani iyo Dhalinyarda dhexdhexaadiyo, intii uu odhan lahaa waan isfahmi weynaye ha nala dhexgalo.
Cabdulahi Mukhtaar ayaa bishii hore Copenhegan u yimid in uu dhex galo, arinta Cadaanina waa uu diiday in uu cidna la hadlo. Waxaana uu u yeedhay rag reerkiisa ah in ayna tagin kulanka sida Raabi dheere [Maykal nin weyn].
Waa sidaas sida uu cadaani u soo bandhigay sawiradan qudhmuunka ah iyo kuwa aanaan soo hor dhigi karin bulshada oo badan.
Waxaa kale oo iyana socota in Maxamed Ibrahin uu sameeyey arimo kale oo foolxun, kuwaas oo aanaan hada jeclaysan in aanu idiin soo gudbino kolka aan helo xogtooda dhabta ah ayaanse idiin soo gudbindoonaa.
Xogahan iyo sawiradan aanu ka xishoonay in aan idiin soo gudbino waxaa na soo gaadhsiiyey Cadaani Hirmooge.
Waraaqo Sir ah oo la Soo Bandhigay